Vaovao - Inona avy ireo karazana lamba ampiasaina amin'ny fanaka?
Karazan-damba inona avy no ampiasaina amin'ny fanaka?
Araka ny lamba samy hafa dia azo zaraina ho hoditra, hoditra artifisialy, lamba sns ny fanaka vita amin'ny lamba vita amin'ny lamba vita amin'ny lamba vita amin'ny hoditra, ny hoditra vita amin'ny fanaka vita amin'ny hoditra vita amin'ny hoditra dia ny hoditra vita amin'ny hoditra, ny lamba vita amin'ny fanaka vita amin'ny hoditra vita amin'ny hoditra vita amin'ny hoditra dia volon-koditra vita amin'ny volony , hemp, landihazo, fibre simika ary lamba hafa. Araka ny akora taolana hafa amin'ny fanaka malefaka, azo zaraina ho taolana hazo, taolana vy ary fanaka malefaka tsy misy taolana. Ny fanaka vita amin'ny rindrina vita amin'ny hazo dia fanaka malefaka miaraka amin'ny akora hazo toy ny taolany. Ny fanaka malemy taolam-by dia fanaka malefaka vita amin'ny metaly na vy sy hazo toy ny taolana, ary tsy misy fanaka rindrambaiko taolana, izany hoe, tsy misy taolam-paty ao anatiny, ary ny fanaka vita amin'ny foam dia apetaka mivantana amin'ny akora vita amin'ny foam, ao anatin'izany ny fanaka tsy mety simba sy feno rano.
1. sofa landihazo: tontolo iainana milamina sy mahazo aina
Ny sezaky lamba vita amin'ny landihazo madio dia malefaka, afaka miaina, voajanahary ary sariaka amin'ny tontolo iainana. Tena akaiky ny hoditra izy io. Io no karazana malaza indrindra amin'ny tsena. Ny fomba Idyllic dia ampiasaina amin'ny sofa landihazo madio indrindra.
2. Flannelette sofa: malefaka sy marefo
Toy ny volom-biby kely, ny zavatra mahavariana indrindra momba ny seza flannel dia ny fikatsahany faran'izay tsara sy malefaka. Manomboka amin'ny corduroy taloha ka hatramin'ny Suède ankehitriny, ny flannelette sofa dia manova ny toetrany amin'ny filalaovana sy kanto. Raha ampitahaina amin'ny lamba hafa dia lafo kokoa ny sofa flannelette.
3. Laso vita amin'ny rongony: mafana amin'ny ririnina ary mangatsiatsiaka amin'ny fahavaratra
Mafana amin'ny ririnina ary mangatsiatsiaka amin'ny fahavaratra, ny ampahany manintona indrindra amin'ny sofa rongony dia ny fitondra hafanana tsara. Na mafana aza ny fahavaratra, aza manahy ny hatsembohana. Ny kalitaon'ny sofa rongony dia akaiky sy malefaka, antonony amin'ny hamafiny sy malefaka, miaraka amina karazana toetra tsotra sy voajanahary.
4. Sopa mifangaro: mitovy amin'ny voajanahary
Ny landihazo mifangaro amin'ny akora fibre simika dia mety haneho ny vokatry ny landy, flannelette na hemp, fa ny lamina sy ny loko tsy voajanahary sy madio, ary ny vidiny dia somary mora vidy ihany.